ATN: May 2008
စားသောက်ဆိုင်ကြီးတခုမှာ သူ အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုဆိုင်က အကြီးကြီးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အစားအသောက်မျိုးစုံကို တည်ခင်းရောင်းချသည်ဆိုတော့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာကိုက အစားအသောက်တွေကို လိုက်လို့ တာဝန်ခံတွေက အများကြီး ရှိသည်လေ။ သူကတော့ အဲသည် စားသောက်ဆိုင်ကြီးရဲ့ အာရှအစားအသောက်ပိုင်းမှာ တာဝန်ခံ။
သည်နေ့တော့ အလုပ်သွားဖို့ သူ့အိမ်က ကားမောင်း ထွက်လာပြီးလို့မှ သိပ်မကြာသေး မိုးက ရုတ်တရက်ကြီး ရွာချလာလေသည်။ ရွာသည်မှ အတော့်ကို သည်းသည်းထန်ထန်။ အမြင့်ဆုံးသို့ တင်ထားသည့်တိုင်အောင် ၀င်းဒ်ရှီးလ်ဒ်ပေါ်က မိုးရေတွေကို သူ့ကားဝိုက်ပါက အကုန်လုံး မသုတ်ပေးနိုင်ချေ။ ဒါကြောင့် မိုးရေတွေ ရှုပ်ရှက်ခပ်အောင် တွန့်လိမ် စီးကျနေသည့် ၀င်းဒ်ရှီးလ်ဒ်မှတဆင့် ကားလမ်းကို ၀ိုးတ၀ါးသာ သူ မြင်နေရတော့သည်။ သည်လိုနဲ့ သူလည်း မောင်းနေသည့် အရှိန်ကို လျှော့ချလိုက်ရပြီး အရှေ့က လမ်းကိုသာ အသည်းအသန် ကြည့်နေရတော့သည်လေ။ သူ့ အရှေ့က ကားတွေလည်း ထို့အတူ။ သည်လိုနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ရှိသမျှ ကားတွေအားလုံး ဖြေးဖြေးချင်းသာ မောင်းနေကြရတော့သည်။ သည်အချိန်မှာ အဓိကက အန္တရာယ် မဖြစ်ဖို့ မဟုတ်လား။ ခရီးဖင့်သွားတာကတော့ ကိစ္စသိပ်မရှိ၊ ဘေးကင်းဖို့သာ လိုရင်း ဖြစ်သည်လေ။ သည်လိုနဲ့ သူ့ကားကို အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် ဖြေးဖြေး ဂရုစိုက် မောင်းနေရင်းမှ - အား .... ငါတော့ ဒီနေ့ အလုပ် နောက်ကျပြီ။ အိုး ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ ဘ၀မှာလည်း တခါတခါ သည်လိုပဲ အရှိန်တွေ လျှော့ရတာပဲဟာ - လို့ သူ တွေးနေမိလိုက်သေးသည်။
သည် အခါမဲ့ မိုးကြောင့် အလုပ်ကို သူရောက်တော့ ဆယ်မိနစ်လောက် နောက်ကျသွားလေသည်။ သို့သော်လည်း သူ ကံကောင်းလေသည်လားတော့ မသိ၊ အလုပ်ရှင်ကလည်း ရောက်မလာသေးချေ။ သူ့လို အလုပ်သမားတွေချည်းသာ အလုပ်ထဲမှာ ရှိနေသည်။ ဒါပေသည့် သူ တာဝန်ယူရသည့် နေရာမှာတော့ သူ့အောက်က လူတွေအားလုံးက ရောက်နှင့် နေကြပြီးပြီ။ နာရီကို သူ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၃ နာရီ ၁၂ မိနစ်။ သူ ၁၂ မိနစ် နောက်ကျနေပြီ။ အမှန်ဆို သူက သည်မှာ တာဝန်ခံ ဖြစ်သူဆိုတော့ အရင် ရောက်ကိုနေရမည် ဖြစ်လေသည်။ ယနေ့အဖို့တော့ သူ မတတ်နိုင်တော့။ မျက်နှာ ပူပူနဲ့ပဲ သူ့ လက်ထောက် တယောက်ကို - ဟေး ဘယ်လိုလဲ- ဟု လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရသည်။ ထိုသူကတော့ သူ့ကို ပြန်ပြုံးပြရင်း - ဒီလိုပါပဲ ဆရာရေ့၊ ဆရာလည်း မိုးမိသွားတယ်ထင်တယ်၊ ကျနော်တို့အားလုံးလည်း အခုလေးတင်ပဲ ရောက်လာကြတာ။ ဆရာ့ထက် တမိနစ်လောက်ပဲ စောမယ် - ဟု ပြန်ပြောလေသည်။ သည်စကားကို ကြားတော့မှပဲ သူ သက်ပြင်း ချနိုင်သွားသည်။ - အို တခါခါတော့လည်း ဘ၀မှာ ဒီလိုပါပဲ။ တယောက်နဲ့ တယောက်ကလည်း သိပ်ကွာကြတာ မဟုတ်ပါဘူး - ဟု သူ့ဘာသာသူ စိတ်သက်သာရာရသွားရင်း ဖြေတွေး တွေးလိုက်မိသေးသည်။
သည်လိုနဲ့ လုပ်စရာရှိသည်များကို ဆက်တိုက် လုပ်နေရင်းက - အင်း ဒီနေ့ကတော့ သောကြာနေ့ဆိုပေမယ့် မိုး အသည်းအသန် ရွာနေတာဆိုတော့ သိပ် အလုပ်ရှုပ်မယ်တော့ မထင်ဘူး။ စောစော ပြန်ရရင် မနေ့က ရေးလက်စ စာကို အဆုံးသပ်ရဦးမယ်။ ဒီညတော့ အင်တာနက်ပေါ် အပြီး တင်နိုင်မယ်ထင်တယ် - လို့ သူ့ဘာသာ တွေးနေမိလိုက်သေးသည်။
သို့ပေမယ့် ဘယ်အရာတခုကိုမျှ ပုံသေကားချ ပြောလို့ မရနိုင်သည့် သည်ကမ္ဘာကြီးမှာ အရာအားလုံးက သူ ထင်ထားခဲ့ သမျှနှင့် တက်တက်စင်အောင် လွဲသည်လေ။ မိုးတွေ ရွာနေသည့် ကြားက လူတွေကလည်း ၀င်လာမစဲ တသဲသဲ ဖြစ်နေသည်။ စားသောက်ဆိုင်က ခုံတွေလည်း အားလုံး အပြည့်၊ သူတို့တွေ အားလုံးလည်း ရှုပ်ရှက်ခပ်အောင် အလုပ်တွေ အပြည့်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ အများစုက စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ အလုပ် နားကြသည်ဆိုတော့ သောကြာနေ့ညမှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရာသီဥတု ဆိုးဆိုး၊ မိုးပဲရွာရွာ ညဉ့်နက် သန်းကောင်တိုင်သည်အထိ နေပြီး အပန်းဖြေလေ့ ရှိကြသည်လေ။ ညဉ့်နက်လေ ဆိုင်တွင်းသို့ဝင်လာသူက ပိုများလေ ဖြစ်နေလေသည်။
သူအလုပ်လုပ်သည့် ဆိုင်က အရက်ဘားလည်း ရှိလေသည်ဆိုတော့ ညဉ့်နက်လေ အရက်ဘားမှာ လူပိုများလေ ဖြစ်လာပြီး သူတို့ အာရှ အစားအသာက်တွေက ပိုပြီး အရောင်း သွက်နေလေတော့သည်။ အရက်နဲ့ အာရှ အစားအသောက်တွေကပဲ ပိုပြီး လိုက်ဖက်နေလေသည်လားတော့ သူလည်း မသိ။ ဘားမှာ လူပိုများလေ သူ တာဝန် ယူထားရသည့် နေရာက လူအားလုံး အလုပ် ပိုရှုပ်လေ ဖြစ်နေလေတော့သည်။ သူကတော့ ညဉ့်နက်မှ ၀င်လာသည့် သကောင့်သား သကောင့်သားမများကို ကျိန်ဆဲနေမိလေတော့သည်။ - ဘာအလုပ်မှ မရှိတဲ့ဟာတွေပဲ ဖြစ်မယ်။ သူများ သားသမီး အိပ်တဲ့အချိန်မှာ ဒင်းတို့က မအိပ်ပဲ အရက် လာသောက်နေကြပုံ ထောက်တော့ တယောက်မှ သောက်ဖိုးတန်ပုံမရဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် အလုပ်ကိုယ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ အော်ဒါတွေလာသမျှကို သူကပဲ ကြီးကြပ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲ ပေးနေရသည်လေ။ သည်လိုနဲ့ ဆိုင်ပိတ်သည့် ည ၁၂ နာရီ ထိုးသွားသည့်တိုင်အောင် သူတို့အားလုံး တချက်မျှ မနားလိုက်ရပေ။ ဆိုင်က ၁၂ နာရီ ပိတ်သည်ဆိုသော်လည်း လက်တွေ့မှာက ပစ္စည်းပစ္စယများကို ပြန်လည် ထားသိုရ၊ နောက်နေ့အတွက် လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်ရ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရ၊ ကြမ်းပြင်ကအစ ဆေးကြော သန့်ရှင်းရ-ဆိုတော့ အလုပ်အားလုံး ပြီးသည့်အချိန်မှာ ည ၁ နာရီ ထိုးလုနီးနီး ဖြစ်နေလေပြီ။ သူကတော့ ဘီယာ တလုံးကို ဆွဲယူ ဖောက်သောက်ရင်း သူ့လက်ထောက်များကို နောက်နေ့အတွက် အသင့် ထုတ်ထားဖို့လိုသည်များကို ပြောပြီး သူ့ကားရပ်ထားရာ ပတ်ကင်းလော့တ်ဆီသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ပတ်ကင်းလော့တ်မှ လမ်းပေါ်သို့ မောင်းတက်လိုက်ရင်း သူ့ဘာသာသူ အရမ်းပင်ပန်းနေသည်ကို သိလိုက်သည်။ လူက အရမ်းအိပ်ငိုက်နေပြီ။
သည်လိုနဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရှိရာ ရှော့ပင်းစဲင်တာကွန်ပေါင်းဒ်ထဲမှ သူထွက်လာတော့ ည တနာရီ ကျော်နေခဲ့ပြီ။ အိမ်ပြန်လမ်းပေါ်ကို သူဦးတည်လိုက်သည်။ လမ်းမီးများက မလင်းတလင်း။ သည်လိုနဲ့ မောင်းလာရင်း သူ အိပ်ပျော်သလို ဖြစ်သွားသေးသည်ဟု သူထင်လိုက်သည်။ သေတော့မသေချာ။ ဒါနဲ့ လမ်းဘေးက မိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက် ဆိုင်းဘုတ်ကို သူ လှမ်းကြည့်မိလိုက်သည်။ သူတွေ့ လိုက်သည်က ၃၅။ - What the ----? ၃၅ နဲ့ ငါ ဘယ်အချိန် အိမ် ပြန်ရောက်မလဲ - သူ့ဘာသာ တွေးမိလိုက်သည်။ သည်လိုနဲ့ ဘေးဘီ ၀ဲယာ အရှေ့အနောက် တောင်မြောက် အားလုံးကို သူ စူးစိုက် ကြည့်လိုက်သည်။ ရဲကားနဲ့တူတာဆိုလို့ ဘာတခုမျှ မရှိ။ - အိုကေ- Here we go. - လီဗာကို သူစပြီး ဖိနင်းလိုက်သည်။ သူ့ရှေ့တည့်တည့်မှ မိုင်နှုန်းပြမီတာက ၃၅ မှ ၄၀၊ ၄၅၊ ၅၀၊ ၅၅၊ ၆၀၊ ၆၅၊ ၇၀ တထစ်ပြီးတထစ် တဖြည်းဖြည်းချင်း တက်သွားနေခဲ့သည်။ သည်လိုနဲ့ တနာရီ မိုင် ၇၀ နှုန်းနဲ့ အနက်ရောင် ကတ္တရာလမ်းမမှာ သူစီးမျောသွားခဲ့တော့သည်။
သည်လိုနဲ့ မိုင် ၇၀ နှုန်းနဲ့ သူ စီးမျောနေသည်မှာ ဘယ်လောက်ကြာသွားခဲ့သည်လဲ သူ့ဘာသာ သူမသိချေ။ သူ သတိ ထားမိလိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့နောက်ကြည့်မှန်ထဲက မြင်နေရသည့် အ၀ါရောင် ကားမီးလေး ၂ လုံး။ ပထမတော့ ဒါ တခြားကား တစီးစီးရဲ့ ရှေ့မီးလုံးပဲ ဖြစ်မည်လို့ သူ တွေးလိုက်မိသေးသည်။ ဒါပေသည့် သည် မီးဝါ၂ လုံးက သူ့လိုပဲ မိုင် ၇၀ နှုန်းနဲ့ သူ့နောက်က အရှိန်အတူတူ စီးမျောနေတာဆိုတော့ - ဟိုက် ….. ဒါ ရဲကားလား။ သူ့ နောက်ကြည့်မှန်ထဲက တဆင့် သူ့နောက်က ကားကို သူ အသေအချာ ကြည့်လိုက် မိသေးသည်။ ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ ရဲကားတွေလို မီးတန်း ပါသလားပေါ့။ သည်လိုကျတော့လည်း မီးတန်းကို သူမတွေ့ရ။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါတော့ ဖြစ်သွားသည်။ ဒါဆို ရဲကား မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အမှတ်အသား မပါတဲ့ ရဲကားလည်း ဖြစ်နေနိုင်သေးသည်။ သည်လိုနဲ့ လီဗာကို ပုံသေနင်းထားရာက သူ စပြီး လွှတ်ပေး လိုက်တော့သည်။ မိုင်နှုန်းပြမီတာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျသွားနေသည်။ ၆၅၊ ၆၀၊ ၅၅၊ ၅၀၊ ၄၅၊။ လမ်းဘေးကို သူ ကြည့်လိုက်တော့ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းက ၄၀။ မီတာက ၄၀ ရောက်သွားတော့မှ လီဗာကို သူ ပြန်ထိမ်းလိုက်သည်။ ကားက ၄၀ နဲ့ သွားနေသည်။ သူ့နောက်က မီးဝါ ၂လုံးကလည်း သူ့လိုပင် သူ့ အနောက်က ၄၀ နဲ့ လိုက်လာ နေသည်။ သည်မှာ သူ သိလိုက်သည် - ကြိမ်းသေတယ် ဒါ ရဲကားပဲ၊ အမှတ်အသား မပါတဲ့ ရဲကား။ သူ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့။ သည်အချိန်မှာပဲ နောက်ကားဆီမှ အနီရောင်နဲ့ အပြာရောင် မီးမျိုးစုံက တဖြတ်ဖြတ် လင်းလက်လာသည်လေ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နောက်ကားက ရဲကားဖြစ်ပြီး သူ့ကို ရပ်ခိုင်း (Pull Over) နေခြင်းပင်။
သည်လိုနဲ့ ကားလမ်းရဲ့ညာဖက်ခြမ်းရှိ ကွက်လပ်တခုဘေးမှာ ကားကို သူရပ်ပေးလိုက်သည်။ အရေးပေါ် ကားရပ်လျင် ပြရသည့် မီးကိုလည်း သူဖွင့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်၊ ကားအင်းရှူးရဲင့်စ်၊ ရက်ဂျစ်စ်တြေးရှင်း စသည်များကို သူ ရှာဖွေ ထုတ်ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ရောက်လာမည့် ရဲ အရာရှိကို သူ စောင့်နေလိုက်သည်။
နောက် တမိနစ်လောက်ကြာတော့ အသက် ခပ်လတ်လတ်အရွယ် ရဲအရာရှိကို သူ့ ဒရိုက်ဘာဆိုဒ် ၀င်းဒိုးမှာ သူတွေ့ လိုက်ရသည်။ Do you know why I stop you, sir? သူကတော့ ဘာမှ ပြောမနေတော့ပဲ ကားတံခါးကိုဖွင့်ကာ သူရှာဖွေထုတ်ယူထားသည့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ထို ရဲအရာရှိအား ကမ်းပေးလိုက်သည်။ ရဲအရာရှိက သူပေးလိုက်သမျှတွေထဲက ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်ကဒ်ပြားကိုသာ ယူသွားပြီး ကျန်သည်များကို သူ့ကို ပြန်ပေးလေသည်။ ထို့နောက် ထုံးစံအတိုင်း ရဲကားဆီသို့ပြန်သွားပြီး သူ့လိုင်စင်နံပတ်ကို ကွန်ပြူတာထဲ ရိုက်ထည့်ပြီး Background Check လုပ်နေလေသည်။ ထို့နောက် သူ့ကားဆီသို့ ပြန်လာပြီး သူ့ကို မေးလေတော့သည်။ Do you have any reason for speeding, Sir? You go 70 in 35-mile-zone. I just watch you passing me 70 and I just follow you. And you kept going 70. What is the reason? သူ ခဏတော့ ဆွံ့အနေလေသည်။ သို့သော်လည်း သူ့ ပါးစပ်က စကားတွေ အလိုအလျောက် သူမရည်ရွယ်ပဲ ထွက်သွားလေသည်။ - I am so sorry, Officer. I don’t mean to do this. But I hadalong tired day and I felt so sleepy that’s why I didn’t want to fall asleep on my wheel. I want to be home right away and takearest. That’s all. When I realize I am going over the speed limit I started reducing my speed as you see, right? သူ ပြောသမျှကို ထိုရဲအရာရှိက ခေါင်းငြိမ့်ရင်း နားထောင် နေခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ့ကို ပြန်ပြောသည် - You already haveatraffic ticket for speeding last year. I just ranacheck. And I like to know why you get that ticket.
သည်မှာ သူပြန်စဉ်းစားလိုက်မိသည်။ မနှစ်က သည်လိုအချိန်ပေ။ သူက အလုပ်ထဲမှာ။ သူ့အမျိုးသမီးက သားလေး၂ယောက်နဲ့ ဘုရားကျောင်း သွားတက်သည်။ သူက အလုပ်ထဲက သွားပြန်မကြိုနိုင်တော့ ဘုရားကျောင်းကလူတွေက သူတို့ သားအမိကို အိမ်ရှေ့မှာ ချထားပေးခဲ့သည်။ သည်မှာ အိမ်သော့ကို အမျိုးသမီးက အိမ်ထဲမှာ မေ့ထားခဲ့သည်။ သည်လိုနဲ့ အိမ်ထဲကို သူတို့ သားအမိတွေ ပြန်ဝင်လို့ မရတော့။ သည်တော့ သူ့ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ပြောတော့ သူကလည်း စားသောက်ဆိုင်ကနေ ကမန်းကတမ်း ကားမောင်းပြန်ခဲ့ရသည်လေ။ သည်မှာ လမ်းပေါ်မှာ သူ့ရှေ့တည့်တည့်ကနေ သူ့ကို ပိတ်ပြီးမောင်းနေသော လိပ်ကား ၃ စီးကို သူ့နောက်တည့်တည့်မှာ ရောက်နေသော ရဲကားကိုတောင် သတိမထားမိပဲ ယာဉ်ကြော ထဲမှာ ဇစ်ဇက် (Zig-Zag) လုပ်ခဲ့သော သူ့ကို ရဲမေ ၂ ဦးက လမ်းပေါ်မှ ဆွဲချခဲ့ဖူးသည်လေ။ သည် အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ ကျော်ဟိန်းဆိုခဲ့ဖူးသော သီချင်းတပုဒ်ထဲလိုပဲ - ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး… ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး … - ဟု သူ့မဟေသီက သူ့ကို နောက်ခဲ့သည်လေ။
ဒါနဲ့ အဲသည် အဖြစ်အပျက်ကို Honestly အစချီပြီး ရဲအရာရှိကို သူက ရှင်းပြခဲ့လေသည်။ ရဲအရာရှိကလည်း သူပြောတာကိုနားထောင်ပြီး Anyway do you drink alcohol tonight? ဟု မေးလေသည်။ သူ ဘီယာတလုံး သောက်ထားခဲ့သည်။ ဒါပဲ၊ သူမမူးခြေ။ Yes, I just drinkacan of beer. သူ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောလိုက်သည်။ ရဲအရာရှိက Where do you work, Sir? ဟု သူ့ကိုမေးလေသည်။ I work at the downtown park that you might know. ဟု သူပြန်ဖြေလိုက်လေသည်။ ရဲအရာရှိကလည်း I see, I know where it is. ဟု ပြောလေသည်။
သည်လိုနဲ့ သူ ရိုးရိုးသားသားပြောသည်ကို ယုံကြည်သွားလေသည်လားမသိ ထို ရဲအရာရှိက - OK! Drive safely and slow down! ဟု သူ့ကိုပြောပြီး သူ့ ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်ကို သူ့လက်ထဲသို့ ပြန်ထည့်ပေးသွား သည်လေ။ သူက မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်မိသွားရင်း Unbelievable! No ticket! No nothing! သူ့ဘာသာသူ ပြန်မေးနေမိသည်။
သူ မိုင်ပိုမောင်းမိတာတောင် ဘာပြသနာမှ မဖြစ်သည်ကို တကယ်တော့ သူ ဂုဏ်မယူပါ။
တကယ်ကလည်း ဘ၀ဆိုသည်မှာ လမ်းတခုလိုပဲ ဖြစ်လေသည်။ လမ်းခြေအနေကိုလိုက်ပြီး သည်လမ်းမှာ သည်မိုင်နှုန်း။ ဟိုလမ်းမှာ ဟိုမိုင်နှုန်း၊ စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားကြရသည်။ ဒါကလည်း အလကားနေရင်း သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်မဟုတ်။ သည်လမ်းမှာ သည့်ထက်ပိုမောင်းခဲ့လျင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အန္တရာယ်များမှ အားလုံး လွတ်ကင်းအောင် သတ်မှတ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်လေ။
ဆိုတော့ ပြောရရင် ဘ၀ထဲမှာလည်း မိုင်နှုန်း ပိုမမောင်းသင့်ချေ။ ပိုမောင်းလျင်တော့ ...
ဒါပေသည့် သူကတော့ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် မိုင်ပိုမောင်းခဲ့မိသည်။
ဘ၀ထဲမှာ မိုင်ပိုမောင်းခဲ့မိသည့်သူ့အား ခွင့်လွှတ်နိုင်သူများက ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည်။
- အောင်သာငယ် -
အလွန် အေးလွန်းသော သည် မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ကို သူ စိတ်ပျက်လွန်းလှသည်။ အစားအသောက်တွေက ဈေးပေါ သော်ငြား အအေးဒဏ်ကို သူ့ သားလေးတွေက မခံနိုင်ကြ။ နှုတ်ခမ်းတွေ ကွဲပြီး သွေးတွေ စို့နေသည်မှာ မြင်လို့ မကောင်း။ ပူအိုက် စွတ်စိုသော ရာသီဥတု ရှိရာ အရပ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ကြရသူများမို့ သည်ပြည်နယ်က သူတို့ မိသားစုအတွက် တခြား ကမ္ဘာ တခုလို ဖြစ်နေသည်လေ။ ရာသီ ဥတုကို သူ ဂရုမစိုက်ပေမင့် သူ ကိုယ်တိုင် သည်ပြည်နယ်ကို မကြိုက်နိုင်တာ တခုရှိနေလေသည်။ ကားမောင်းရ ခက်ခဲခြင်း။ ရေခဲနဲ့ နှင်းတွေ အပေါ်မှာ ကားကို ဘရိတ် အုပ်လို့မရ။ ဘရိတ်သာ အုပ်ထားသည် - စတီရာရင်ကိုသာ ဆွဲထားသည် - ကားက သွားချင်ရာကို သွားနေလေသည်။ အက်ဆီးဒဲင့်တွေကိုလည်း သူ့ရှေ့မှာ မရေမတွက်နိုင်အောင် တွေ့နေခဲ့ဖူးပြီ။ အရပ်တကာမှာ ရေခဲနဲ့ နှင်း။ ဘယ်နေရာနင်းနင်း ဒင်းတို့နဲ့ မလွတ်။ ကားမောင်းရင်လည်း မမောင်းခင် ကားဝင်းဒ်ရှီးလ်ဒ်တွေပေါ်မှာ အခန့်သား နေရာ တက်ယူထားတတ်သည့် ဒင်းတို့ကို အရင် ခြစ်ထုတ် ရသေးသည်။ လမ်းပေါ် ကိုယ့်ကား ရောက်အောင်လည်း ဒရိုက်ဗ်ဝေးမှာ ရှိနေသည့် ဒင်းတို့ကို အရင် မြေလှန် ရသေးသည်။ နိစ္စဓူဝ။ ကြာတော့လည်း ဒါတွေကို သူ စိတ်ပျက်လာသည်။
သည်လိုနဲ့ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေကို လှမ်းဆက်သွယ် စုံစမ်းရင်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ရာသီဥတု အကြမ်းဖျင်း တူညီသည့် တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်တခုကို သူတို့ မိသားစု ရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရေခဲသေတ္တာပြည်နယ်နဲ့ ဝေးရာ သည်မြို့လေးက သေးငယ်သော်လည်း သပ်ရပ်သန့်ရှင်းနေသည်။ သူ နေခဲ့ဖူးသမျှ မြို့များနဲ့ တခြားဆီ။ တိတ်ဆိတ်သည်။ လူတွေ များများစားစား မတွေ့ရ။ မျက်စေ့နောက်စရာတွေလည်း သိပ်မရှိ။ ရာဇ၀တ်မှုကလည်း နည်းသည် (စာရင်းဇယားတွေအရ)။ ပင်လယ် ကမ်းခြေနဲ့လည်း နီးသေးသည်။ သည်လိုနဲ့ သည်မြို့လေးမှာ သူ့မိသားစုကို အခြေချဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဇနီးသည်ကလည်း သဘောတူလေသည်။ သည်လိုနဲ့ သည်မြို့လေးကို သူပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိနေခဲ့သည်မှာ ဆယ်နှစ်ပင် ရှိရော့မည်။ သည်နှစ်များအတွင်း အလုပ်တခုပြီးတခု သူ ပြောင်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလုပ်သစ်တိုင်းက ၀င်ငွေပိုများသည့် အလုပ်တွေပဲ ဖြစ်သည်။ အခုလည်း နောက်ထပ် ၀င်ငွေပိုရသည့် အလုပ်သစ်တခုကို သူရခဲ့သည်။
အလုပ်အသစ်ရတော့ သူ အိမ်ပြောင်းဖို့ လုပ်ရလေသည်။ သူ့ အလုပ်အသစ်နဲ့ အနီးဆုံး နေရာတခုမှာ အပတ်မဲင့်တခု ရှာတွေ့ပြီးတဲ့နောက် သူအိမ်ပြောင်းခဲ့သည်။ သူနေတဲ့ အပတ်မဲင့်နဲ့ အလုပ်သစ်က ၁၅ မိနစ်စာ လမ်းလျှောက်သွားရုံသာ ဝေးလေသည်။ အလုပ်က မနက် ၇ နာရီခွဲ စတော့ အိမ်က ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်ဆိုရင် သူ စထွက်ရပြီ။ အလုပ်က နေ့လည် ထမင်းစားချိန် တနာရီရသည်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီဆိုရင် သူအိမ်ပြန် ထမင်းစားသည်။ ခဏ နားပြီးတော့ အလုပ်ကို ပြန်သွား။ ညနေ ၅ နာရီဆို အလုပ်သိမ်း အိမ်ပြန်လာ။ သည်လိုနဲ့ သူ့ အပတ်မဲင့်နဲ့ အလုပ်ကို တနေ့တနေ့ အသွားအပြန် ၂ခေါက် နေ့တိုင်း လျှောက်ဖြစ်နေသည်။ သို့ပေမယ့် သည်မြို့မှာက လမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်သူက နည်းပါးလွန်းလှသည်။ အလွန်ရှားရှားပါးပါး တွေ့ရခဲလေသည်။ လူအားလုံးက ကားတွေနဲ့ချည်း သွားလာနေကြသည်။ တခါတခါ ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျှောက်သူ၊ ဂျော့ဂင်းလုပ်နေသူ တချို့ကလွဲလို့ လမ်းပေါ်မှာက ကားတွေချည်းသာ။ သူကတော့ ကားရှိပေမယ့် အလုပ်နဲ့ အိမ်က နီးတာ တကြောင်း၊ ဓါတ်ဆီ ချွေတာရာလည်းကျ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းတဲ့အတွက် အလုပ်ကို လမ်းပဲ လျှောက်သွားဖြစ်နေသည်။
ကြာလာတော့ သည်ငတိအပေါ် သူ မနာလိုစိတ် နည်းနည်း စဖြစ်လာလေသည်။ သူ့မှာက တပတ် ၆ ရက် အလုပ်လုပ်နေရပြီး သည်ငတိကတော့ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ရပဲ တနေ့နေ့ ပြူတင်းပေါက်မှာနေပြီး သူ့ကို ထိုင်ထိုင်ကြည့်နေတာပဲရှိသည်။ ကြည့်ရတာ တနေ့လုံးပဲ အဲဒီမှာ လူတွေကို ထိုင်ကြည့်နေသလားတောင် မသိ။ သူ့လို ဘ၀မျိုးသာ ငါရကြည့်ပါလား။ သူ့လိုမျိုး ပြူတင်းပေါက်မှာ အချိန်ထိုင်ဖြုန်းနေမယ့်အစား တခြား ၀ါသနာပါတာတွေ အများကြီး လုပ်ဖြစ်မှာပဲလို့ သူတွေးနေမိသည်။ ကဗျာတွေရေးမယ်၊ သီချင်းတွေ စပ်မယ်၊ စာတွေလည်း အများကြီးဖတ်ဖြစ်မှာပဲ။ အမယ်လေး - ကောင်းလိုက်တာ - အဲလိုဘ၀မျိုးကို ငါကျတော့ ဘာလို့ မရတာလဲ-လို့လည်း သူ့ဘာသာ စဉ်းစားနေမိသည်။ ပြီးတော့ ဆက်စဉ်းစားရင်း သည်ငတိကြည့်ရတာ မိသားစုလည်း ရှိပုံ မပေါ်ဘူး-လို့လည်း တွေးမိလိုက်သေးသည်။
သည်နေ့လည်း အလုပ်ကအပြန် တာဝန်တခုလို အဲဒီပြူတင်းပေါက်ကို ကြည့်လိုက်မိသေးသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ငတိက သူ့ကို ငုံ့ကြည့်နေသည်။ သူကလည်း ပြန်မော့ကြည့်ရင်း ပြုံးပြလိုက်ရရင် ကောင်းမလားလို့ အူကြောင်ကြားနဲ့ စဉ်းစားမိလိုက်သေးသည်။ သည်ငတိကတော့ သူပြုံးပြသည့်တိုင် သူ့ကို ပြန်ပြုံးပြမယ့်ပုံတော့ မရှိလေ။ အိမ်ရောက်တော့ ဇနီးသည်ကို သည်ငတိ အကြောင်း ပြောပြလိုက်သေးသည်။ ဇနီးသည်ကတော့ - အို သူက ဖြတ်သွားတဲ့ လူတိုင်းကို စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်မှာပေါ့။ ရှင့်တယောက်တည်းကိုပဲ စောင့်ကြည့်နေတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လျှောက်ပြီး အတွေးကြောင်မနေစမ်းပါနဲ့။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်စမ်းပါ - လို့ မှတ်ချက်လိုလို အမိန့်လိုလိုပေးလေသည်။
သည်လိုနဲ့ လောကကြီးကို သူ စတင်သိရှိခဲ့ရာ မိဘမဲ့ဂေဟာမှ မွေးစားမိခင်၏ အိမ်ဂေဟာသို့ သူ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သူ့မွေးစားမိခင်က သူကို တနေ့ အစား ၃ နပ်ကျွေးလေသည်။ သူမ အလုပ်မသွားခင် သူ့ကို ထွေးပိုက်ပြီး မနက်စာကျွေးသည်။ သူ့ကို ဆံပင်တွေ ဘာတွေ ဖီးသင်ပေးသည်။ နောက် နေ့လည်စာအတွက် အဆင့်သင့် ပြင်ဆင်ပေးသွားပြီး - အမေ သွားပြီနော်။ သား- အိမ်မှာ ကောင်းကောင်းနေ။ ညနေကျရင် ပြန်တွေ့မယ် ဟုတ်လား- နိစ္စဓူဝ သူမ ပြောနေကျ စကားကို ပြောပြီး ထွက်သွားလေသည်။ သည့်နောက်တော့ သူမ ပြန်မရောက်လာမချင်း သည်အိမ်ထဲမှာ သူ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နိုင်သည်လေ။ တခု တွေးကြည့်လျင်တော့ အတော် သက်တောင့် သက်သာရှိပြီး လွတ်လပ်သည့် ဘ၀လို့ပဲ ပြောရပေမည်။ သူ့မှာ ဘာတာဝန်မှလည်း မရှိ၊ လုပ်စရာလည်း ဘာတခုမှ မရှိ။ လုပ်ချင်တာ အားလုံးကို သည်အိမ်အတွင်းမှာ သူလုပ်နိုင်သည်လေ။ သည် အိမ်ကို စရောက်ခါစကတော့ သူ အလွန်ပျော်သည်။ ဂေဟာမှာလို မဟုတ်တော့ အတော့်ကိုပင် လွတ်လပ်မှုအရသာကို သူ ချိုမြိန်နေခဲ့မိသည်။
at 3:31 AM 10 comments:
မို့မောက်တဲ့ ဒေါသတွေနဲ့ ...။
၁၉၉၆ နိုဝင်ဘာလထုတ် ဒေါင်းအိုးဝေ အတွဲ ၁ အမှတ် ၁ မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။
နာဂစ်စ် ... နာဂစ်စ်... နာဂစ်စ်....
ဒင်း... နံမည်က အခုလို အင်တာနက် ခေတ်ကြီးမှာ ကမ္ဘာ့ ထောင့်ကြားတိုင်းမှာ ပဲ့တင်ပြန်နေလေတော့သည်။ နေရာတကာ ဒင်း...။ ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့်...ဒင်း...။ ဘယ်ဆိုက် သွားသွား...ဒင်း....။ ဘယ်ဘလော့ တက်တက်...ဒင်း...။ ဘယ်ဝက်ဗ်ဆိုက် ၀င်ဝင်...ဒင်း...။ ဒင်း မျက်နှာချည်းသာ နေရာ အနှံ့။ အလုပ်ထဲ သွားတော့လည်း ဒင်း။ အလုပ်က ပြန်တော့လည်း ဒင်း။ အိမ်က မိန်းမမျက်နှာကို ကြည်မိတာတောင် ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ဒင်း...ကြောင့်ပဲ။၊
မေလ ၂ ရက်နေ့က စခဲ့သည့် ဒင်း ရမ်းကားမှုက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာရှိသမျှ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသားအားလုံးကို ဘ၀ ပျက်စေခဲ့သည်လေ။ လူအားလုံးကို ပေါင်းချိန်လို့မှ တဆယ်သားတောင်မပြည့်တဲ့ တပ်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ နေပြည်တော်ကိုတော့ ယောင်လို့တောင် မျက်စောင်းမထိုးသွားဘူး။ အခုတော့ ကျုပ်တို့ တနိုင်ငံလုံးရဲ့ ထမင်းအိုးကြီးကိုမှ မှောက်ချသွားလေတယ်။ စပါးခင်းတွေ သွားပေါ့။ ၀မ်းစာတွေ သွားပေါ့။ မျိုးစပါးတွေ သွားပေါ့။ လယ်သမားတွေလည်း သွားပေါ့။ ကျွဲနွားတွေလည်း သွားပေါ့။ ဘာမှမကျန်ရစ်တော့ပြီ၊
အခုတော့ ဒင်းက ဘယ်ဘုံမှာ စံမြန်းလေသည်မသိ။ ကျုပ်တို့ နိ်ုင်ငံသားတွေမှာတော့ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့။ စားစရာမဲ့။ နားခိုစရာမဲ့။ ကယ်မဲ့သူမဲ့၊ ဘ၀တွေကျိုးပဲ့လို့...။ တချို့ မိသားစုတွေဆို အားလုံးသေဆုံးခဲ့။ တချို့တော့ တယောက်တည်း ရှင်ကျန်ခဲ့။ ဝေဒနာတွေက တနေ့တခြား ပို တိုးတိုးလို့သာ လာနေတော့တယ်။ စိတ်သက်သာရာရစရာ တခုမှကို မရှိဘူး။
ရင်ထဲမှာ ဒေါသတွေက အစိုင်အခဲ...။
အိုး မိုင်.. ဘုရားရေ...လို့ မတ တတ်တာ ငါပဲ...။
သတင်းတွေကို ဖတ်ရတိုင်း ရင်ကွဲ...။
ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရတိုင်း ကြေကွဲ...။
အဲဒီ ဓါတ်ပုံတွေက ငါ့ကို ရင်ခွဲ...။
မိုးရေ ရွှံ့ဗွက်တွေထဲ ညီမငယ်ကို လက်ဆွဲ...။
မိသားစုမှာ ကျန်ခဲ့တာ နှစ်ယောက်ထဲ...။
သားငယ်အလောင်းကို ပိုက်ပွေ့ ရင်ထဲ...။
မင့် အမေကို တော့ ငါ ရှာနေဆဲ...။
သွားနှင့်သားရေ လိုက်ခဲ့မယ် အဖေလည်း...။
အဖိုးက အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ အားကနည်း...။
ရေက ဆွဲချသွားတယ် အားလုံးကိုပဲ...။
ဒေါသတွေထွက်တော့ ငါက ကျိန်ဆဲ..။
ငါ ဟစ်ဟော့ပ် ဆိုရရင် ကောင်းမလား- တွေးနေဆဲ...။
သီချင်းတပုဒ်တော့ ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး။ ဝေဒနာတွေ ဖျော်ချထားတဲ့ အက်ဒ်ဗတ်မွန့်ရဲ့ အော်သံလိုမျိုး ပန်းချီကား တချပ်ပဲဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်တယ်။ ရင်ထဲက ဝေဒနာတွေ နည်းနည်းလောက် ပေါ့ပါးသွားမလားလို့။
ရာသီစက်ဝိုင်းတောင် နှေးကွေးလို့ ....
အဲဒါ ငါ့ နှလုံးခုန်သံပဲ။
ဝေဒနာတွေ ဖိစီးသွားလို့ ---
အနှစ် ၂၀ ကျော်အောင် ငါဆိုခဲ့..
ကျနော်လည်း အနှစ် နှစ်ဆယ်ကို
Designer ကိုမျိုးရဲ့ လက်ရာပါ
ငါ့ တကိုယ်လုံး တစစီလွင့်စင်သွား--
ငါ အစွမ်းကုန် ကြေကွဲတယ်၊
ငါ့ အမျက်တွေ ချောင်းစီးသွားကုန်ပေါ့။
ငါ အစွမ်းကုန် ဒေါသထွက်တယ်-
လူတွေ ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ နတ်ဘုရားအမျိုးစုံကို။
အဲဒီ နတ်ဘုရားတွေ အပုံလိုက် လဲကျသွားအောင်
ငါ့ နိုင်ငံသား ကလေးလေးတွေကို မကယ်လို့။
ငါ အစွမ်းကုန် မုန်းတီးတယ်-
အဲဒီ စစ်အာဏာရှင်တွေ အပုံလိုက် လဲကျသွားအောင်
ငါ့ နိုင်ငံသားတွေကို မကယ်လို့။
သင်တို့အား အစွမ်းကုန် ငါမုန်း၏။
လေးစားရတဲ့ဒီမိုကရေစီညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ ခင်ဗျား
လေဘေးကြောင့်သေဆုံးတဲ့ သူအရေအတွက် ဟာ တသိန်ကျော်ရှိနေပါပြီ။ ပျောက်ဆုံတဲ့သူတွေလည်းရှာဖွေလို့ မရသေးပါဘူး။ ထိုင်းနိင်ငံက အကူညီဟာ လေယဉ်တစီးစာထဲမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်သာယာက ဒုက္ခသည်တွေကို ကျော်ဆန်းက ဆန်အိပ် အသေး ၁၂၀ မျှသာ ဝေသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာလုံးဝမလုံလောက်နိင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ လူထုအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အကူညီတွေကိုတကယ်တန်းထိထိရောက်ရောက်ပေးနိင်တာကတော့အမေရိကန်အစိုးရပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေယဉ်သဘောင်္အမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဟယ်လီကော်ပတာတွေနဲ့ 
ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ ဒေသတွေကိုဝင်ရောက်ကူညီနိင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့စွမ်းရှည်ကို အမေရိကန်ရေတပ်ကသာပေးနိင်ပါတယ်။ သမတဂျော်ဘုရ်က မြန်မာပြည်ကို ကူညီဖို့ပိုင်းဖြတ်ချက်ရှိနေပါပြီ။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျနော်တို့ လူထုအတွက် အလိုအပ်ဆုံးသောကူညီမှုဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဆူနားမိဘေးအန္တရယ်ကျရောက်တုံးက အမေရိကန်ရေတပ်က ၀င်ရောက်ကူညီပေးခဲ့နိင်ပါတယ်။ အမေရိကန် အကူညီများရရှိရေး အတွက် နိင်ငံတကာရှိ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများ မြန်မာသံရုံးရှေ့ မှာ သွားရောက်ဆန္ဒပြီးအမေရိကန် အကူညီကို လက်ခံဖို့သွားရောက်ဆန္ဒပြပေးကြ ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။